herbal medicine for anụmanụ Manufacturers, suppliers - China herbal medicine for anụmanụ Factory
Ọdịiche: Ọgwụ herbal Pharmacodynamic Ihe Ndị Na -emetụta: Nkwakọ ngwaahịa anụmanụ: 500g ma ọ bụ 1000g /akpa ma ọ bụ 500ml ma ọ bụ 1000ml /karama ma ọ bụ OEM. Nrụpụta ihe: karama 20000 na akpa 20000 kwa ụbọchị Ebe mmalite: Hebei, China (Chile) Asambodo: GMP ISO Port: TIANJIN Proventriculitis ọgwụgwọ mejupụtara: aconite, fangfeng, pinellia, peji tangerine, poria, asarum, jujube, angelica, astragalus, licorice, ginger akpọnwụwo. Ngosi ： Ìgwè anụ ọkụkọ na -eto eto na mmepe adịghị mma, buru ibu na ...
Ọgwụ ụkwara mejupụtara: Ephedra, Almond Ilu, Gypsum, Njirimara licorice a asara n'ọkụ: ọ bụ mmiri mmiri aja aja gbara ọchịchịrị: Eji ya agwọ ụkwara na akwa nkụ nke ọrịa iku ume na-ebute, nnukwu na nnukwu bronchitis Broiler 15-18days: Mgbe ọnya necrotic isi awọ na-apụta. n'ime ngụgụ, enwere ike iji ngwaahịa a hichaa akụkụ iku ume iji gbochie embolism tracheal. Ojiji na usoro onunu ogwu: 500ml gwakọtara mmiri ọLụ 200ụ 200L n'ime awa 4 maka ụbọchị 3-5 na-aga n'ihu.
Ahụ ọkụ ahụ mejupụtara: Ephedra, Bupleurum, Gypsum, Anemarrhena, Japonica Rice, Licorice, wdg Njirimara: ọ bụ mmiri mmiri gbara ọchịchịrị Ngosipụta: A na -eji ya maka ahụ ọkụ kpatara ọgwụ mgbochi nke broilers na akwa. Ahụ ọkụ kpatara oyi na ihe ọ bụla ọzọ dị iche iche kpatara. Ojiji na usoro onunu ogwu: 500ml gwakọtara mmiri ọ-2ụ 150ụ 150-250L maka ụbọchị 3-5 na-aga n'ihu.
Imeju na akụrụ
Imeju na akụrụ dị mma Ngosipụta: imeju na splenomegaly, mmebi na necrosis kpatara ịba ọcha n'anya vibrio na ọrịa nje; mmebi imeju na akụrụ nke ọrịa imeju abụba na -ada, mmebi nri, nsị ọgwụ, wdg; A na -etinye ngwaahịa a otu ugboro na broilers mgbe ọ dị afọ 16, nke nwere ike igbochi ihe mberede ọnwụ mberede ma belata ọnwụ na oge ikpeazụ. N'ọgwụgwụ nke ọgwụgwọ ọrịa, a na -eji ngwaahịa a imezi imeju mebiri emebi ...
Mgbanwe nke ọnụahịa AKL
Ọgwụ AKL mejupụtara: Codonopsis, Astragalus, Licorice, Aconite, Ginger a mịrị amị, Cornus, Plantain, Gentian, Yinchen, Bupleurum, Gardenia, Salvia, Rhubarb, Angelica, White Peony. Akpọburu echiche Ankara na mbụ "Ọrịa ịba ọcha n'anya", mana emechara kpọọ ya "Ọrịa Ankara" n'ihi ntiwapụ na Ankara, Pakistan. Ihe e ji mara ya bụ ọnwụ mberede na ọkụkọ, anaemia siri ike, jaundice, imeju imeju, splin, na akụrụ, ọbara ọgbụgba na ...
Ọgwụgwọ IBD /IB /ND
Usoro ọgwụgwọ IBD /IB /ND: Forsythia, honeysuckle, scutellaria, akwụkwọ mulberry jụrụ oyi, almọnd ilu, chrysanthemum, epiphyllum, plantain, silk, angelica, yam, hawthorn, abụ Chineke, malt, barley, gardenia, gentian, kudzu root, licorice , Bupleurum, wdg. Ngosipụta: Broilers adịla ụbọchị 25-32, nwere mgbaàmà ụlọ ọgwụ dịka ụkwara, ahụ ọkụ, ọgbụgbọ, anorexia, imeju na akụrụ na-abawanye. Ịtọ ọkụkọ nwere mgbaàmà dị ka mbelata ọnụego mmepụta akwa, ụkwara, ahụ ọkụ, akwa ọcha, yello ...
Ọgwụ AIV/ọgwụgwọ ọrịa
Ọdịiche: Ọgwụ herbal Pharmacodynamic Ihe Ndị Na -emetụta: Nkwakọ ngwaahịa anụmanụ: 500g ma ọ bụ 1000g /akpa ma ọ bụ 500ml ma ọ bụ 1000ml /karama ma ọ bụ OEM. Nrụpụta ihe: karama 20000 na akpa 20000 kwa ụbọchị Ebe mmalite: Hebei, China (Mainland) Asambodo: GMP ISO Port: TIANJIN AIV ọgwụgwọ cure ọgwụgwọ ọrịa) mejupụtara: silkorm siri ike, akpị dum, centipede, toad crisp, coptis, angelica, forsythia, borneol, gypsum, gardenia, houttuynia, wdg Ngosipụta: 1) A na -eji ya agwọ ọrịa na -adịghị agwụ agwụ ...
Ọgwụgwọ oyi mejupụtara: ginger, aconite, licorice a asara n'ọkụ, astragalus, mmanya osikapa, epimedium Ngosipụta: kwalite oriri, melite otu, melite nguzogide; belata mgbochi mgbochi. Ọnụọgụ ọgwụ: 1) Chick: 1-7 ụbọchị, 0.2ml/pc. Na -akwalite nnabata nke nkochi ime akwa na mee ka mmepe nke akụkụ ahụ na -alụso ọrịa ọgụ dị ngwa. Mee ka ịdị arọ ahụ dị ụbọchị 7 baawanye ma melite ịdị n'otu. 2) ụbọchị 60 nyefe/gbasaa otu 0.5ml/pc. 3) 1ml/pc mgbe nrụgide oyi. (Ọgwụ dị mgbe oyi gasịrị) 4) Mgbe itinyechara ya ...
Ọgwụ rhinitis mejupụtara: Xin Yi, cocklebur, platycodon, almọnd, plantain, angelica Ngosipụta: ụkwara, dyspnea, doro anya, mmiri imi dị gịrịgịrị site na oghere imi mbụ, mgbe ụbọchị 2-3 gachara, mmiri imi ji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe ka odo odo. oghere na mucosa imi na -eme mkpọtụ na ọzịza, ihu na -azakwa aza. Ojiji na usoro onunu ogwu: A na-eji ọkụkọ 500-800 eme okenye na 500ml wee jiri ya mee ihe n'ime awa anọ nke itinye uche. Nkpachapụ anya: 1) A na -eji ngwaahịa a maka ọgwụgwọ l ...